Ergadii horay Gaalkacyo oga tagtay oo maanta shir qabtay ka dib markii ay shalay Garoowe ka yimaadeen, (Sawirro) – Radio Daljir
Diseembar 27, 2012 6:09 b 0
Gaalkacyo Dec, 27- Waxaa maanta magaalada Gaalkacyo shir ku qabtay ergadii dhawaan ka tagtay magaalada Gaalkacyo ee Garoowe u tagay ka qayb galka shir ay ugu magac dareen aaya ka talinta Puntland, kaasoo sababay in la xirxiro qaar ka mid ah xubnihii qaban qaabiyay.
Shirkan maanta Gaalkacyo ka dhacay waxaa sidoo kale ka qayb galay nabadoonada gobolka qaarkood iyo siyaasiyin dhaliilsan nidaamka socda.
Ugu horayn waxaa sharaxaad ka bixiyay safarkii Garoowe iyo wixii ay kala soo kulmeen Eng, C/risaaq Xaaji Xasan (Burgal) wuxuuna sheegay inay markii ay Garoowe ay tageen ay la kulmeen maamulka isla markaana ay isku raaceen inay qabsan karaan shirka, hase ahaatee waxaa uu dhaliilay qaabkii markii danbe loola dhaqmay.
Waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon Maxamuud Maxamed Bile, nabadoon Xuseen Cilmi (Dhagaw), iyo xubno kale oo isugu jira ergadii Garoowe gaadhay iyo kuwo ku sugnaa Gaalkacyo.
Nabadoonad ayaa qaarkood waxay isimada ugu baaqeen inay xaalada murugsan ee xiligan inay soo fara galiyaan iyagoo ka digay inay xaaladdu intaan ka sii dari karto.
Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay C/raxmaan Sh Maxamed (Gablax) oo ka mida siyaasiyiinta sida weyn oga soo horjeeda waqtiga jiritaan ee hay’adaha dawligaa ee Puntland.
Nabadoonada iyo siyaasiyiinta ayaa sidoo kale cod dheer ku codsaday in xoriyadda la siiyo xubnaha uu ka mid yahay nabadoona Yaasiin Cabdi Samad.
Xubnaha kulanka maanta Gaalkacyo ku yeeshay ayaa dhamaantoodba u muuqanayay kuwo ka soo horjeeda halka sanno ee la sheegay inuu u harsan yahay xukunka Dr, Faroole m/weynaha PL.